Liqhakazile ikusasa lentombazanyana yaKwaDukuza | Eyethu News
Sisaqasha !!!! - September 12, 2017
Business Advertising Directory - August 28, 2017
All You Need to Know About the Everyday Taxi Driver - June 30, 2017
Trump faces backlash over US servicemen claim about Obama and other presidents - 3 hours ago
US-backed force says has fully captured Raqa from IS - 3 hours ago
Thief in a suitcase robs bus baggage hold - 3 hours ago
Conservative Kurz says Austria to play ‘active’ role in EU - 3 hours ago
‘Hurricane of flames’ ravages a Portuguese village – death toll rises to at least 36: VIDEO - 3 hours ago
Liqhakazile ikusasa lentombazanyana yaKwaDukuza
“Waqala ukukhombisa ukuthanda ukuba nguZime eneminyaka emine”
UYolanda Mthiyane oneminyaka eyisishiyagalolunye
LIBUKEKA liqhakazile ikusasa lentombazanyana eneminyaka eyisishiyagalolunye, nokuthe kamuva nje yawina isicoco sozime abancane, esaziwa ngele-Miss Pageant SA, emncitniswaneni buwenzelwe endaweni yaseBallito, KwaDukuza.
Umama kaYolanda Mthiyane, uNkk Sarah Mthiyane, utshele lowo omele i-Eyethu News ukuthi indodakazi yakhe ingumuntu okhuthele kukho konke ekwenzayo. Uthe uYolanda, nofunda ibanga lesine esikoleni iKloof Primary School, waqala ukutshengisa uthando lokuba nguzime ngesikhathi esaneminyaka emine.
Uqhube wathi ngonyaka odlule uYoanda uye wawina isicoco sika-Miss Little Upper Highway, kanti lesi sicoco silandelwe ngesika-Miss Little KZN, nasiwine ngoMarch kulo nyaka.
Njengamanje usewine isicoco sikazwelonke, kanti kulindeleke ukuthi ngonyaka ozayo ayozama ukuwina isicoco somhlaba sozime abancane. Uthe indodakazi yakhe ibuye ibambe iqhaza kwezokugibela amahhashi, kanti futhi ingumdansi wohlobo lwe-ballet ezingeni lesifundazwe. Uqhube wathi akugcini nje ngalokho, njengoba indidakazi yakhe ibuye ibe yivolontiya ekhaya lezintandane iSibusisiwe, endaweni yaseKloof nokuyilapho umndeni usuzinze khona.
Ibeyimpumelelo iMayoral Cup e – Edendale
Kucime izibani uMncane ethola iSakhiwo – ejele
Uyobolela ejele olahlwe elokubulala
Silala ngezinye sivuke ngezinye uMongameli eshintsha ongqongqoshe
Udilika jele kwabase Richmond ngokudlwengula
Utholukuthi sohlangana e’Sun City’ kugwetshwa uBrickz ngelokudlwengula
Kunothiswa abamatekisi …. ngolwazi, nempatho kubagibeli
Kuhoxisiwe ukuqondiswa izigwegwe kwabafundi ePMB
Kulimale abawu-3 kugingqika iloli eMbali
Uxinwe yisisu otholwe enoxhaxha lwamacala ‘akagwetshwa’
Ukungawutholi umsebenzi kukhulise oyimbongi
Kutholakale ugebhezi lwentombi ehlathini, kwaboshwa isoka eNqabeni
BUKA: Umlilo udla kwasani ephambi kwawo
Esinye isikole sasePMB ‘kwelokucwasa’ ngobuhlanga
Hammarsdale Junction-Mall Feature CLICK HERE
Bakhala ngezindlu zangasese ezingekho esimweni eSweetwaters